प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न - साथ छँदा आन्द्रा गाँस्ने, साथ छुट्दा आन्द्रै निकाल्ने अलि अप्रिय भएन र ? Canada Nepal
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न - साथ छँदा आन्द्रा गाँस्ने, साथ छुट्दा आन्द्रै निकाल्ने अलि अप्रिय भएन र ?
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुमाथि खरो टिप्पणी गरेका थिए।
उक्त समारोहमा ओलीको टिप्पणीप्रति प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन् । उनले माधव नेपालको विषयमा ओलीले गरेको टिप्पणी अशोभनीय भएको बताएका छन् ।
आफूसँग मिलेको समयमा ठीक नत्र बेठीक भन्ने अओलीको अभिव्यक्ति प्रश्न गर्दै भने - 'प्रचण्डसँग एमालेको एकता ठिक, कांग्रेसको कुरा मुद्दामा मिल्दा बेठिक ? साथ छँदा आन्द्रा गाँस्ने, साथ छुट्दा आन्द्रै निकाल्ने अलि अप्रिय भएन र ?'
यस्तै उनले माधव नेपालप्रति गरेको टिप्पणी शोभनीय मानौं कि दयनीय भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् - 'प्रचण्डसँग एमालेको एकता ठिक, कांग्रेसको कुरा मुद्दामा मिल्दा बेठिक ? साथ छँदा आन्द्रा गाँस्ने, साथ छुट्दा आन्द्रै निकाल्ने अलि अप्रिय भएन र ? अझ माधव नेपालप्रतिको टिप्पणी शोभनीय मानौं कि दयनीय ? सम्माननिय @Pm_Nepal विनम्रसंग शोध्छु अभिव्यक्तिमा चरम आवेगको यो कस्तो `भेरिएन्ट´ ? '
समारोहमा ओलीले नेपाली कांग्रेसले ‘प्रचण्डपथ’ अँगालेको बताएका थिए । ओलीले पार्टीबाट राजीनामा नदिई संविधान मास्नेदेखि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर दिएका नेता नेपाल दुनियाँकै अराजक र अलोकतान्त्रिक नेता बनेका आरोप लगाएका थिए ।
आषाढ १४, २०७८ सोमवार १८:४४:३८ बजे : प्रकाशित